Wararka - Abaalmarinta Tartanka Rugta Ganacsiga
13th, OKTOOBAR 2020
Xafladii furitaanka ee yun Baituan War ee 2020 waxaa la bilaabay Ogosto 15. Shirkadu waxay qorshe cad u sameysay dagaalkan, qof walbana wuu iskaashaday oo wuxuu shaqeeyey waqti dheeri ah si uu ugu guuleysto sharafta shirkada. sidoo kale dhigay abaalmarino.
Intii lagu gudajiray dagaalkii rugta ganacsiga, kooxdeena "onkod corps" hogaamiye kasta oo ganacsi wuxuu isu yimaadaa inuu bixiyo talo iyo qorshe, waxaan iska baranaynaa midba midka kale si aan nafteena u xoojino. Amiirka iyo shaqaaluhuba waxay xooggooda oo dhan galiyeen dagaalka
Munaasabadda abaalmarinta, barnaamijyada kala duwan ee ay soo diyaariyeen Legion, wadaagga maamulka ee Guddiga Leegada ee ku guuleysatay Legion, iyo barnaamijka isdhexgalka ee su'aasha aqoonta iyo jawaabta dhammaantood waxay abaalmarinnada ka dhigayaan kuwo cad, cajiib ah oo xiiso leh. Wadaagista milkiilayaasha meheradaha, aan ogaano jiritaanka dulduleelada, xagga maamulka iyo aqoonta xirfadeedba waxay leeyihiin boos lagu horumariyo. Mashruuca ay soo qabanqaabisay Rugta Ganacsigu wuxuu ka dhigay shirkaddeenna ganacsiga shisheeye ee Hebei midnimo badan.
Shirkadeena ayaa soo koobaysa tartankan, waxay soo jiidanaysaa awooda kuwa kale waxayna soo koobaysaa farqiga. Bilaha soo socda, waxaan xoojin doonnaa kooxdeena ganacsiga waxaanan xoojineynaa qaabka maamulkeena. Qoyska shirkadeena ayaa qaadan doona muuqaal cusub. Heer sare oo xirfado xirfadeed si loola kulmo boqollaha cusub ee Dagaalka.
Haddii aad rabto inaad waxbadan naga ogaato, nala soo xiriir si aad noola soo biirto. Waxaan diyaar u nahay inaan gacmaha is qabsano dhalinyarada hiigsaneysa si loo abuuro qaab ganacsi caalami ah loona ogaado qiimaha shirkada iyo shaqsiyaadka. Waxaan rajeyneynaa in iyadoo la raacayo hagida riyadayada, aan ku guuleysan doonno guusha macaamiisheena, shirkadaha iyo shaqaalaha!